दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ असोज १२ गते आइतबार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर २९ - Sutra TV Sutra TV
मेष : तपाईं दीर्घ रोगबाट ठीक हुनुहुनेछ। तपाईंलाई केही तनाव दिन सक्ने रिसाहा स्वभावको व्यक्तिबाट जोगिनुहोस्, जसले समस्या अझै बढाउन सक्छ। आमाबाबुको सहायताले गर्दा वित्तीय बाधाहरु टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेशको लागि राम्रो समय, तपाईं रोमान्टिक विचार र विगतका सपनाहरूमा हराउनु हुनेछ। यात्रा गर्ने मौका खोज्नु पर्नेछ। यो दिन तपाईंको नियमित वैवाहिक जीवनमा विशेष दिन होस् तपाईंले आज साँच्चै असामान्य केही अनुभव गर्नु हुनेछ।
वृष : आफ्नो अप्रत्याशित प्रकृतिले तपाईंको वैवाहिक सम्बन्ध बिगार्न सक्छ। यसबाट जोगिने निश्चित गर्नुहोस् अन्यथा तपाईंले पछि पछुताउनु पर्न सक्छ । आर्थिक सुधार भएमा तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण खरीद गर्नको लागि सुविधा हुनेछ। आज तपाईंले आफ्नो बुद्धि र प्रभावलाई घरका संवेदनशील विषयहरूको समाधान गर्न प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। आफ्नो प्रेमीकासँग रातको सम्बन्ध धेरै साना मुद्दाहरूको पछि पनि तनावपूर्ण रहनेछ। आफ्नो तागत र आफ्नो भविष्यको योजना पुनः आकलन गर्ने समय। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्य गडबड भएकोले आज तपाईंको काममा केही समस्या हुन सक्छ।
मिथुन : आफ्ना आशाहरू पूरा गर्न व्यक्तिगत सम्बन्धको दुरूपयोग गर्नाले तपाईंकी पत्नीलाई चिन्तित बनाउन सक्छ। मनोरञ्जन वा कस्मेटिक सुधारमा पनि धेरै खर्च नगर्नुहोस्। तपाईंको कार्डमा धार्मिक स्थल वा आफन्तको घरमा भ्रमण गर्ने सम्भावना देखिन्छ। रोमान्टिक चालले फाइदा हुनेछैन। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। तपाईंले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुसँग कठिन समयको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर दिनको अन्तमा तपाईंको जोडीले तपाईंलाई माया दिनेछन्।
कर्कट : हँसिलो हुनुहोस् किनकि यो तपाईंका सबै समस्याहरूको लागि उत्तमा विष मार्ने औषघि हो। आज लगानी गर्नबाट बच्नुपर्छ। तपाईंको आकर्षण र व्यक्तित्वले केही नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। के तपाईंले कहिल्यै अदुवा र गुलाबसँगको चकलेट सुँघ्नुभएको छ ? तपाईंको प्रेमी जीवन आज त्यस्तै स्वादिलो हुनेछ। यात्राले तपाईंलाई नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू भेट्न सघाउँछ। विवाहको मामलामा आज तपाईंको जीवन साँच्चै नै रमाइलो देखिन्छ।
सिंह : तपाईंको अथाह प्रयास र परिवारका सदस्यहरूको समसामयिक सहयोगले इच्छित परिणाम ल्याउने थियो। तर अहिलेको झैं जाँगर कायम राख्न कठिन कार्य गरिरहनुहोस्। हतारमा निवेश नगर्नुहोस्। यदि निवेश गर्दा तपाईंले सबै सम्भव कोणबाट हेर्नु भएन भने घाटा निश्चित छ। साथीहरूसँग सांझ बिताउनु वा किनमेल गर्नु अत्यधिक सुखद र रोमाञ्चक हुनेछ। एक अर्कालाई राम्ररी बुझ्नको लागि तपाईंले आफ्नो प्रेमी सँगै समय बिताउनु आवश्यक छ। आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो वैवाहिक जीवनका सबै दुःख दिने सम्झनाहरु भूलेर आजको वर्तमानमा रमाइलो गर्नु हुनेछ।
कन्या : तपाईंले आफ्नो शारीरिक शक्ति कायम राख्न खेलमा आफ्नो समय बिताउने सम्भावना छ। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ। साथी तथा आफन्तहरूलाई आफ्नो राय जबरजस्ती नथोप्नुहोस्, किनकि यो तपाईंको नहुन सक्छ र तपाईंदेखि तिनीहरू अनावश्यक रूपमा रिसाउन सक्छन्। कसैको लागि नयाँ रोमान्स निश्चित देखिन्छ, आफ्नो प्रेमले तपाईंको जीवन फूलाउनेछ। आज गरेको निर्माण कार्य तपाईंको इच्छा अनुसार पूरा हुनेछ। यो दिन आफ्नो वैवाहिक जीवनको लागि साँच्चै ठूलो छ। आफ्नो साथी थाहा छ तपाईं उहाँलाई प्रेम कति गरौं।
तुला : शारीरिक वास्तविकता हेर्ने इच्छा भएमा तपाईंले आफ्नो विचार र ऊर्जा बाँट्नुहोस्। मात्र अन्दाजले कुनै कुरो हुँदैन। तपाईंसँग अहिलोसम्म भएको समस्या के हो भने तपाईंले प्रयास नगरेर मात्र इच्छा गर्नुहुन्छ। प्राचीन वस्तु र गहनामा लगानी गर्नाले लाभ र समृद्धि हुनेछ। मित्र र परिवारका सदस्यहरूले तपाईंलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछन। आफ्नो प्रियसँग सानो छुट्टी मनाइरहेकाहरूको लागि अत्यधिक स्मरणीय समय हुनेछ। आज तपाईंले किनमेल गर्न जानुभयो भने आफैलाई राम्रो पहिरन सामाग्री छनोट गर्न सम्भावना छ। तपाईंलाई आजको दिन आफ्नो वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन अनुभव हुनेछ।
वृश्चिक : तनावलाई बेवास्ता गर्नु पर्दैन। यो तीव्र गतिमा सुर्ती र रक्सी झैं गम्भीर रूपमा एउटा महामारी बन्दैछ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। समग्र रूपमा लाभदायी दिन हो, तर तपाईंलाई भरोसा लाग्ने कसैले तपाईंलाई गिराउन खोज्नेछ। प्रेममय जीवन जीवन्त हुनेछ। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। आज तपाईंको जोडी साँच्चै नै राम्रो मुडमा छ। तपाईंले एउटा आश्चर्य प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ।
धनु : तपाईं आफैंलाई राम्रो बनिएको महसुस गराउनको लागि काम गर्ने अद्भुत दिन। आज तपाईंले सजिलै धन बढाउन सक्नुहुन्छ, उल्लेखनीय ऋण सङ्कलन गर्नुहुन्छ, वा नयाँ परियोजनाहरूमा काम गर्नको लागि धनको अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले चिनेका कसैले घरमा वित्त सम्बन्धि समस्यामा धेर विवाद ल्याएर घरमा अशान्ति ल्याउने परिस्थिति बनाउन सक्छ। तपाईं प्रेममा बिस्तारै तर निरंतर जल्नु हुनेछ। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। आफ्नो जोडीको घट्दो स्वास्थ्यको कारण तपाईंलाई तनाव हुन सक्छ।
मकर : तपाईंको आकर्षक व्यवहारले ध्यान आकर्षित गर्नेछ। अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। घरमा केही परिवर्तनले तपाईंलाई अत्यधिक भावुक बनाउनेछ, तर तपाईं प्रभावकारी ढंगले तपाईंको कुरा बुझ्ने मानिसहरूलाई आफ्नो भावना प्रकट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। आज कोही तपाईंको प्रेम बीच आउन सक्छ। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। आज आफ्नो जोडीसँग तपाईंले केहि बाँट्न बिर्सिनुभएको कारण तपाईंसँग उनी झगडा गर्न सक्छन्।
कुम्भ : तपाईंको लागि मान्छेलाई जबरजस्ती काम गर्ने बाध्य नगराउनुहोस्। तपाईंलाई असीमित आनन्द दिने अरूलाई गर्न चाहेको र चासोको बारेमा सोच्नुहोस्। संयुक्त उद्यम र शंकास्पद वित्तीय योजनाहरुमा लगानी नगर्नुहोस्। विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, कसैले तपाईंलाई धेरै नजिकबाट हेरिरहेको छ र तपाईंलाई विशेष व्यक्ति ठान्दछ, प्रशंसनीय कामहरू मात्र गर्नुहोस् जसले तपाईंको प्रतिष्ठालाई अझै उठाउन सक्छ। आज आफ्नी प्रियतमासँग शिष्टतासाथ व्यवहार गर्नुहोस्। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन्, जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। तपाईंले आज आफ्नो जोडीको कठिन र साहसी पक्षको अनुभव गर्न सक्नु हुन्छ जसले गर्दा तपाईंले असहज महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
मीन : आनन्ददायी यात्रा र सामाजिक भेलाहरूले तपाईंलाई तनावमुक्त र खुसी राख्नेछ। अस्थायी ऋणका लागि तपाईंसँग भेट गर्नेहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। तपाईंले उनका रायको वास्ता गर्नुभएन भने आफ्नो प्रेमीको धैर्य गुमाउनु हुनेछ। आज तपाईंको प्रियलाई तपाईंको असह्य व्यवहारसँग सामना गर्न अत्यन्तै गाह्रो पर्नेछ। आज यात्रा-मनोरञ्जन र सामाजिक क्रियाकलाप तपाईंको एजेन्डामा हुनेछ। तपाईं र आफ्नो साथीबीच आज फरक सोच हुनाले तर्क हुन सक्छ।